Ny AMCM mankalaza ny faha 30 taonany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
AMCM - Dokotera katolika
Ny AMCM mankalaza ny faha 30 taonany
Noro H. il y a 5 mois
Tontosa ny sabotsy 14 novambra teo ny fankalazan’ny AMCM (Association des Médecins Catholiques Malgaches) ny faha 30 taona nijoroany.
Fihaonan’ny mpianakavy, nanovozana aim-panahy sy nifampizarana ny nofon-kena mitam-pihavanana no nentin’ny mpikambana ao amin’ny AMCM sy ireo vahiny nasainy, nankalaza ny faha 30 taona nijoroan’ny fikambanana. Ny AMCM dia fikambanana dokotera malagasy niorina tao aorian’ny fitsidihan’ny Papa Joany Paoly II teto Madagasikara, ny taona 1989.
Tamin’izany fotoana izany tokoa mantsy dia nantsoina hifanome tanana momba ny lafiny fahasalamana sy vonjy taitra ny katolika mpiasan’ny fahasalamana. Olona ana hetsiny no niombom-bavaka tamin’ny toerana nolalovany, indrindra fa ny teo Antsonjombe – toerana nanaovana ny Sorona Masina notarihan’ny Papa sy nanambarana ny maha Olontsambatra an’i Victoire Rasoamanarivo – ka tena nilaina ny vonjy taitra. Marobe tokoa ny dokotera (teo koa ny mpiasan’ny fahasalamana hafa) namaly ny antso, koa satrin’izy ireo ihany ny hitazona izay firohotana izay, ka dia natsangana ny AMCM. Ny Pr Hyacinthe R. Rajaona no filohan’ny Fikambanana hatramin’izay nijoroany ka mandrake ankehitriny. Nifaneken’ny mpikambana ny hitazonany io toerana io amin’ny maha raiamandreny azy.
30 taona aty aoriana
Tao anatin’izay fotoana nisiany izay dia nisy ny Dispansera natsangana teny anivon’ny Paroasy sasantsasany, ho fanampiana ireo fianakaviana sahirana mila manatona dokotera. Ankehitriny dia miisa enina ireo Dispansera AMCM tantanan’ny dokotera avy ao amin’ny fikambanana. Mamelo-tena ireny dispansera ireny ary mahavita izany tokoa, indrindra rehefa tsara ny fiaraha-miasa amin’ny paroasy. Tsara ny manamarika fa nankalaza ny faha 30 taona nijoroany ny iray amin’ireo dispansera ireo, dia ny eo Analamahitsy.
Maro ireo dokotera mikatroka ao amin’ny AMCM. Efa miely patrana manerana ny Nosy ny mpikambana hatramin’izay 30 nisian’ny fikambanana izay. Tao ireo efa nitantana dispansera no lasa mpiasam-panjakana na miasa amin’ny toeran-kafa – an’ny fikambanan-drelijiozy na an’ny tobim-pahasalamana tsy miankina hafa - fa mbola mpikambana ihany.
Manohy ny asa fanasoavana efa nataony hatrany am-piandohana ny mpikambana. Marihina fa saika fianakaviana sahirana avokoa no manatona ireo tobim-pitsaboana, ka tsy afaka manao sarany ambony ny dokotera fa izay heverina ho takatry ny olona no enti-miasa ao amin’ny dispansera. Mandray anjara mavitrika amin’ny hetsika ilàn’ny Fiangonana ny fandraisan’andraikitry ny mpitsabo ihany koa ny AMCM. Tato anatin’izao fiatrehana ny valanaretina Covid-19 izao dia mpiara-miasa akaiky amin’ny rafitra napetraka hoenti-miady amin’io aretina io ny AMCM ka mandray anjara amin’ny fanentanana eny ifotony amin’ny fihetsika iatrehana ny valanaretina.
Fa momba izay fiatrehana ny Covid 19 izay ihany dia nisedra fahasahiranana tahaka ny rehetra ny AMCM sy ny mpikambana ao aminy ary ny Dispansera notantanany. “Nisy ny fahasahiranana teo amin’ny fisokafan’ny dispansera”, hoy ny Dr Marie Zoé Randriana, sekretera jeneralin’ny AMCM. “ Ny mpitsabo mantsy dia saika tsy mipetraka manodidina ny dispansera tantaniny, ka ny tsy fisian’ny bus tamin’ireny fotoana ireny no olana. Na izany aza dia niezaka nisokatra daholo ihany ireo toeram-pitsaboana, ka tao ny nandray marary betsaka tsy tahaka ny mahazatra, ary niteraka olana ihany koa izay teo amin’ny lafiny fanafody”, hoy ihany izy.
Ho mpitsabo tena mijoro amin’ny maha kristianina azy
Hafatrafatr’i Mompera Joël Rakotomalala, avy ao amin’ny Aomonerian’ny Hopitaly Befelatanana, izay nitarika ny Sorona Masina tamin’ity fankalazanay ity, ny mba hijoroan’ny dokotera mpikambana ao amin’ny AMCM, amin’ny maha kristianina azy. Mba ho filamatra sy horesahan’ny olona nandalo tao aminy hoe “izany ka dokotera ! Iny dokotera iny tena nandray ahy tsara fa tsy niavonavona …”
Dia izay tokoa no faniriana satria be loatra ny fitarainana avy amin’ny marary sy ny fianakaviany mikasika ny sasany amin’ireo mpiasan’ny fahasalamana eny amin’ny toeram-pitsaboana sy eny anivon’ny fiarahamonina eny. Ny dokotera mpikambana ao amin’ny AMCM dia antenaina fa hiaina tokoa ny maha kristianina azy. Mampiavaka azy ireo amin’ny hafa rahateo ny fitaizam-panahy sy ny fiombonana niainany tao anatin’izay 30 taona nijoroany izay.
Lu sur le net : En Afrique, les remèdes traditionnels font de l’ombre aux vaccins contre le Covid-19 - il y a 4 jours